हास्यव्यङ्ग्य | मझेरी डट कम
editor — Wed, 07/01/2020 - 17:45
त्वमेव लमी च प्रेमीप्रेमिका त्वमेव, त्वमेव साथीश्च सर्वस्व त्वमेव
त्वमेव डबली बिज्ञापनं त्वमेव, त्वमेव सर्व म फेसबुक देवदेव
प्राचीन हिन्दू पूराणभन्दा बिल्कुलै भिन्न कलियुगे फेसबुक पूराणको महिमा माथिको मन्त्ररुपी स्तुतिले स्पष्ट पार्दछ । हामी एकछिन आँखा बन्द मनन गरौं त, यदि यो ब्रह्माण्डबाट सूर्य आकस्मत गायब भए के होला? पक्कै पनि जतासुकै अन्धकार हुन्थ्यो । बनस्पति जगत क्लोरोफिल बनाउन नपाएर नाश हुन्थ्यो ।
HomSuvedi — Sun, 05/17/2020 - 20:48
कुनै पनि कुरा नभोगी राम्रो जानिन्न रहेछ । चालिस वर्षअघि जब म पति भएँ अनि मात्र पतिका बारेमा राम्रोसँग बुझ्न थालें । त्यो बेलादेखि नै पतिहरुको कायाकैरन लेखूँला भनेको बल्ल आज मात्र पतिहरुका चरित्रहरू पतिका अघि बिस्कुल लागेर आए भनेपछि पतिकैरन बुझ्न कति लाग्दोरहेछ आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ । सबै पतिको त कसले सकोस् वर्णनको गथासो पुरान हाल्न केही म जस्ता पतिको भने अब म थालें कायाकैरन उतार्न । पतिहरुका प्रकार अनेक रहेछन् ।
HomSuvedi — Sat, 04/25/2020 - 13:44
भर्नाको लफडो आएको छ
HomSuvedi — Mon, 03/23/2020 - 12:32
जनमत मासिक बनेपाबाट साभार
छोरीको दाँत उम्रनु कता हो कता घरमा देउसी भैलो खेल्नेहरुको जस्तै लावालस्कर लाग्न थाल्यो छोरी माग्नेहरुको । उहिलेको बेलामा भए ता बिहेकै लागि केटी माग्नेहरु आएका भन्न सकिन्थ्यो होला तर अहिले यसरी मेरी छोरी माग्न आउनेहरु आफ्नो बालक वा जवान छोराका लागि बुहारी माग्न आएका भने थिएनन् । अलिक जमाना फेरिएको छ । तर पनि भान हुन्थ्यो यी सबै कन्यार्थी वरहरुका आफन्त नै हुन् । एउटा टोली घरबाट निस्कन पाएको छैन, अर्काे टोली थपक्क घरमा आइपुग्छ, अर्काे निस्कन पाएको छैन, अर्काे लगत्तै आइपुग्छ । कस्तो कचेडा हो यो, अनि कस्तो घनचक्करको लफडा हो यो !
editor — Sun, 06/02/2019 - 06:14
सुन्दा पनि खितखित हाँसेको थिए म। नहाँसु पनि कसरी ? रमेशलाई रामेशु भनेको सुन्दा। रुपेशलाई रुपेशु भनेको सुन्दा। उमेशलाई उमेशु भनेको सुन्दा। सन्देशलाई सन्देशु भनेको सुन्दा। त्यही बखत मैले एक लखकाटेको थिएँ, "यिनीहरुले सबै नामको पछाडि तलकुरे झुन्ड्याउँदा रहेछन्।"
हास्य व्यङ्ग्यमा समालाेचना
HomSuvedi — Sat, 02/09/2019 - 11:51
HomSuvedi — Fri, 02/08/2019 - 09:14
"ए भाइ, आज बेलुका आठ बजे होटल हेरिटेजमा मेरो कृतिविमोचनको कार्यक्रम छ, कसै गरी आउनु पर्छ है । ठिक समयमा आउनुहोला । बेलुकाको खान र पानको लागि पनि होटलमै बन्दोबस्त छ । सदम्पतीलाई नै निम्तो गर्छु भ्याउँदिन भन्न पाइन्न नि !"
बिहानै भात पाक्नै नपाई खाएर कुद्नु पर्ने स्थिति परेको थियो आज । काँचै भात चबाउँदा चबाउँदै गर्दा कृतिकारज्यूले फोनबाट निम्त्याउनुभो ।
HomSuvedi — Mon, 02/04/2019 - 11:48
गजल कृतिविमोचको शब्दचित्र
केही सम्पादकहरुलाई चिठी लेखेर साहित्तेमा हात चोबेकैले होला कृतिहरुको विमोचनको अवसरमा मैले पनि निम्ता पाउन थालेको छु ।
HomSuvedi — Mon, 01/28/2019 - 04:57
एउटा आयोजकले विशेष रुपमा अखण्ड काव्यपाठका लागि विशेष प्रबन्ध गरेको थियो । गीत गाउँनेहरुलाई आफ्नै शैलीबाट बाजा बजाइदिने र काव्यपाठमा नृत्यको आवश्यकता परिगयो भने नृत्यमा सामेल हुने गरी केही रेडिमेड नर्तक नर्तकीहरू पनि आयोजकले तयारी अवस्थामा तैनाथ पारेको थियो । यस कार्यक्रमको मूल स्वरुप काव्यपाठ भए पनि बीचमा गजल गीत आदिको पाठ गरेर, हास परिहास, टुक्कावाचन लगायतबाट भए पनि यसको निरन्तरतालाई खण्डित हुन दिनुहुन्न भन्ने आयोजकको आग्रह थियो ।
बाेर्डिङ विद्यालयका क्रियापुत्रि
HomSuvedi — Wed, 05/16/2018 - 20:25
बोर्डिङ् विद्यालयहरुका किरियापुत्रि
HomSuvedi — Sun, 03/04/2018 - 16:16
HomSuvedi — Tue, 10/17/2017 - 15:42
शुभकामना कुकुहरुलाई !!
अब आएको छ तिहार,
अस्तिसम्म दशैं पल्टिएको थियो
राम्रै खानपिनको राम्रो प्रबन्ध थियो
हड्डी मात्र हैन ह्याकुलाकै प्रबन्ध थियो
साँप्रो र ह्याकुलोसँगै सम्बन्ध थियो
अब केही समयलाई यो प्रबन्ध निख्रिए तापनि
तिहार आएको छ
शुभकामना छ भुस्याहाहरुहो
तिहारको शुभकामना छ ।
प्रतीक्षा गर एलसिसिएनहरु
गुन्टामाथि बस्नलाई प्रतीक्षा गर
आज माला लगाएर तिम्रो पूजाको तयारी हुँदैछ
जिउनारका लागि भुजा तयारी हुँदैछ
शुभकामना छ भोटे कुकुरहरुहो
तिमीमा लामो समयसम्म सुतेको
जोे मधुमाश थियो
त्यो अब जागेको छ
किनभने कात्तिक लागेको छ
यो कस्तो चाल
सम्झिएकी छैनौ तिमीले
जिन्दगीको एउटै नाम
भए केही गल्ती
के दशैं भन्नु
जन्म स्थानप्रतिको सम्मान
अचानो न हो जिन्दगी
मनमा माया साँचेर धेरै
सगरो सबेर (कविता)
तीन मुक्तक (जागिर, राजनीति, विवाह)